Frank Lampard oo ka hadlay mustaqbalka Pedro iyo Willian kaddib heshiiska ay la gaareen Hakim Ziyech – Gool FM - Idman news
Frank Lampard oo ka hadlay mustaqbalka Pedro iyo Willian kaddib heshiiska ay la gaareen Hakim Ziyech – Gool FM
Mohamoud 4 days ago 1 min read
(London) 14 Feb 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea ee Frank Lampard ayaa ka hadlay mustaqbalka xiddigaha Pedro Rodríguez iyo Willian, kaddib markii lagu dhawaaqay heshiiska uu Hakim Ziyech uga yimid naadiga Ajax.
Frank Lampard ayaa xaqiijiyay in heshiiska Hakim Ziyech oo gaaraya 40 milyan euro, aysan ka dhigi doonin in xiddigaha Willian iyo Pedro ay ka dhaqaaqi doonaan garoonka Stamford Bridge suuqa xagaaga ee soo socda.
Lampard ayaa kaga jawaabay kaddib markii la weydiiyay su’aal ku aadan mustaqbalka Willian iyo Pedro, kaddib markii ay la heshiiyeen Hakim Ziyech wuxuuna yiri:
“Maya, waxaa jira wada hadalo socda ee ku aadan labadan xiddig, labadoodaba waxay ahaayeen ciyaartoy ku guuleystay Chelsea” ayuu yiri tababare Frank Lampard.
Shalay ayey aheyd kaddib markii ay Kooxda Ajax Amsterdam ku xaqiijisay website-keeda rasmiga ah, in heshiis ay la gaartay naadiga Chelsea, kaasoo ku aadan in Hakim Ziyech uu ugu wareegi doono Blues 1-da July 2020 qiimo gaaraya 40 milyan euro.
Previous Taageerayaasha Liverpool oo helaya war farxad leh ee ku saabsan Sadio Mané kahor kulanka Norwich City – Gool FM
Next “Fursada ay Barcelona ugu guuleysan karto La Liga waxay kala siman tahay Real Madrid” – Quique Setién – Gool FM
Jordan Henderson oo si cad u qiray in Liverpool ay awood badan tahay la’aanta Philippe Coutinho – Gool FM
56 mins ago Mohamoud
Lampard oo ka hadlay dhaawacii xalay N’Golo Kanté ku soo gaaray kulankii Man Utd – Gool FM
Mino Raiola oo si adag ugu jawaabay hadaladii uu macalin Solskjær ka yiri Paul Pogba – Gool FM
MADAXWEYNE DENI OO MAGACAABAY GUDDIGA QABANQAABADA SHIRKA WADA-TASHIGA DOWLADDA PUNTLAND
Taariikhda wixii hore u qormey waa in si fiican loo liqaa mar haddaan dib loo qo…
Faysal Cali Waraabe oo shaaciyay inuu hayo ‘xogo qarsoon’ oo la xiriira kulankii Farmaajo iyo Muuse Biixi
Jabuuti oo Soo Dhaweyn Meeqaam Sare Leh u Samaysay Madaxweyne Deni
MADAXWEYNE DENI OO MAGACAABAY GUDDIGA QABANQAABADA SHIRKA WADA-TASHIGA DOWLADDA PUNTLAND February 18, 2020
Taariikhda wixii hore u qormey waa in si fiican loo liqaa mar haddaan dib loo qo… February 18, 2020
Faysal Cali Waraabe oo shaaciyay inuu hayo ‘xogo qarsoon’ oo la xiriira kulankii Farmaajo iyo Muuse Biixi February 18, 2020
Jabuuti oo Soo Dhaweyn Meeqaam Sare Leh u Samaysay Madaxweyne Deni February 18, 2020
Jordan Henderson oo si cad u qiray in Liverpool ay awood badan tahay la’aanta Philippe Coutinho – Gool FM February 18, 2020
5 days ago Mohamoud
6 days ago Mohamoud
Total visitors : 606